Ny tombotsoantsika - vondrona UP
Orinasa marika varotra izay ampiasain'ny indostria sy ny indostria iraisana ary ny varotra.
Orinasa fivarotana iraisam-pirenena any Shanghai UPG dia orinasam-barotra matihanina izay ampiasain'ny orinasa vaventy sampana UP Group miaraka, ny orinasa no lasa marika mavitrika sy manan-kery indrindra amin'ny indostrian'ny milina fanontana sy fonosana any Shina.
Manana ekipa miasa avo lenta, avo lenta, milamina sy matihanina izahay
Amin'ny fampiharana maharitra amin'ny varotra, manohana sy manangana mpiasa amin'ny fiteny maro, matihanina, diathesis avo lenta sy fahaizana izahay ekipa, izay mandrafitra orinasa lehibe indrindra sy matanjaka indrindra eto amin'ity orinasa ity. Anisan'ireo ekipa miasa misy anay, 97% no mahazo ny mari-pahaizana diplaoma sy mari-pahaizana bakalorea, 40% ny anaram-boninahitra maneran-tany manana diplaoma ambony, diplaoma ambony na ambony.
Manaraka ny filôzôfia izahay fa "serivisy manome lanja be loatra, manamboninahitra mpisava lalana ary manome fandresena"
Manomboka amin'ny rafi-panavaozana isika, manatsara ny rafitra andrim-panjakana, mamboly tsikelikely ary mamorona fikatsahana lanja, ary ny kolontsain'ny orinasa izay manampahaizana manokana amin'ny "Marin-toetra sy mahatoky mendrika, mazoto sy mampanantena, Mikatsaka ny hatsarana sy fahombiazana, serivisy manome lanja be loatra". Izahay dia miantoka hatrany ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy, mametraka fifandraisana maharitra sy marin-toerana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy ao an-toerana ary koa ny mpanjifanay ivelany ho tombontsoa iraisana.
Fahamboniana loharanon-karena be dia be, mifanaraka amin'ny tsipika iray, safidy ambony
Nanangana fiaraha-miasa stratejika maharitra izahay miaraka amin'ny orinasa maherin'ny 50 mahomby, avo lenta sy laza ary orinasa, izay manarona ny fanontam-pirinty sy ny fonosana, ny fonosana amin'ny sakafo sy ny fanafody ary ny fingotra sy ny milina plastika ary mamorona sokajy maro, multispecies ary multilevel Integrity ambony ary manome mety fantsona serivisy ho an'ny mpanjifa vahiny.
Voalamina tsara, avo lenta, dokambarotra fampirantiana momba ny fampirantiana
Ny fampiasam-bola goavambe fampiratiana matihanina maherin'ny 20 sy ny varotra mihoatra ny iray lavitrisa isan-taona dia mampalaza ny orinasanay any ivelany sy manana ny lazany eo amin'ny tsena anatiny sy ivelany. indostria any Sina.
Hamafiso ny fananganana fantsona, serivisy ho an'ny mpanjifa manerantany, lamina stratejika varotra marobe
Nandritra ny taona maro lasa izay, nanondrana vokatra tany amin'ny firenena 80 mahery izahay (tsy i Azia ihany fa i Eropa, Afrika, Amerika atsimo, Amerika Avaratra ary Oseania) ary nametraka fiaraha-miasa stratejika maharitra miaraka amin'ireo mpaninjara sy fantsom-barotra amin'ny firenena 40 mahery. sy ny faritra, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny tsena ivelany misokatra sy mitazona ny mpanjifan'ny serivisy serivisy.